ခရမ်းချဉ်သီးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူအတွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်ပိုလီကာဗွန်နိတ်ဖန်လုံအိမ် - တရုတ်စက်ရုံ - Jianda
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖန်လုံအိမ် > Polycarbonate ဖန်လုံအိမ် > ခရမ်းချဉ်သီးအတွက်စိုက်ပျိုးရေး Polycarbonate ဖန်လုံအိမ်
JIANDA ကုမ္မဏီသည်စိမ်းလန်းသောကုန်ပစ္စည်းများကိုသာရောင်းချသည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အားအောင်မြင်အောင်ကူညီခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်ခြင်း၊ ပြည်သူများအားကူညီခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ဖြစ်သည် ----- JIANDA COMPANY ကိုရွေးချယ်ပါ၊ စိမ်းလန်းသောကုန်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်နှစ်ခုလုံး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့၊ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်သို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် 100% အပျိုစင်ကုန်ကြမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများ၊ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်အားပေးမည်
ခရမ်းချဉ်သီးအတွက်စိုက်ပျိုးသော Polycarbonate ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်မှန်လုံအိမ်၏အရိုးစုသည်သွပ်ရည်စိမ်သည့်သံမဏိပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသွပ်သွင်းခြင်းနှင့်ပုပ်နေသောဆန့်ကျင်သောသော့များ၊ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုပြသခြင်း၊ မျိုးစေ့ပွားခြင်း၊ ပန်းသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စျေးကွက်သို့မဟုတ်ကုန်တိုက်များ၊ ဂေဟဗေဒစားသောက်ဆိုင်၊ သင်ကြားခြင်းနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခေါင် height can be customized
အထူးသဖြင့်လေနှင့်မိုးရွာသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုသော PC စာရွက်ဖန်လုံအိမ်။PC စာရွက်သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးအရည်အသွေးပြည့်ဝသောအလင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ဆူညံသံ၊ လျှပ်ကာနှင့်ခက်ခဲသောလောင်ကျွမ်းမှုနှင့်အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအင်္ဂါရပ်များသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြစ်ပြီး၊ ပလပ်စတစ်ပန်းကန်။
၁။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု - ပီစီပြား၏ထုတ်လွှင့်မှုသည် ၈၉% အထိရှိသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြယ်ပြားများသည်နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့ပါကအဝါရောင်မထုတ်ပေးပါ။
(၂) သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည် - သက်ရောက်မှုသည်သာမာန်ဖန်ခွက်များထက်အဆ ၂၅၀ မှ ၃၀၀ အထိရှိသည်။
(၃) ခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှု - ပီစီဘုတ်ကိုတစ်ဖက်တွင်ခရမ်းလွန်ဆန့်ကျင်မှု (UV) နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်အေးဂျင့်များကိုဆေးကြောသည်။
(၄) ပေါ့ပါးသောအလေးချိန် - အချိုးသည်ဖန်ခွက်၏ထက်ဝက်မျှသာရှိသည်။ ၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ချခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အထောက်အပံ့ဘောင်များ၏ကုန်ကျမှုကိုသက်သာစေသည်။
(၅) စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - နွေရာသီတွင်အေးမြ။ ဆောင်းတွင်း၌နွေးပါ။ PC board ၏ insulator တွင်လည်း ၄၉% အထိရှိသည်။
(၆) အပူချိန်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်မှု - PC board သည် -100 ° C တွင်အအေးမခံနိုင်ခြင်း၊ 135 ° C တွင်ပျော့ပြောင်းခြင်းမရှိပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးအတွက်စိုက်ပျိုးသော Polycarbonate ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိသောသံမဏိကိုယ်ထည်များနှင့်အတူ
1. "GB50017- 2003Steel Design Code" နှင့်ကိုက်ညီရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအဓိကမူဘောင်။
2. သံမဏိပစ္စည်းသည် "GB700-88 ကာဗွန်သံမဏိ" နှင့်တွေ့ဆုံ;
၃။ ပူပြင်းသောသွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအလွှာသံမဏိထုတ်ကုန်များနည်းပညာလိုအပ်ချက်များအပူသွပ်ပြုခြင်း၊ ချောမွတ်သောမျက်နှာပြင်၊ သွပ်အထူအထူ> 70um
ခရမ်းချဉ်သီးအတွက်စိုက်ပျိုးသော Polycarbonate ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အရည်အသွေးရှိသောကာဗွန်ကာဗွန်နိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
အထူ - ၆ / ၈ / ၁၀ မီလီမီတာ
အာမခံချက် - ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ နှစ်အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ သင်မှာယူထားသည့်ပုံစံများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အသိအမှတ်ပြု: ISO9001: 2000 SGS
။ အစားအစာစနစ်တွင်အဓိကအားဖြင့်ဘွိုင်လာများနှင့်ရေဒီယိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့ဘွိုင်လာ၊ ဒီဇယ်ဘွိုင်နှင့်ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာများပါဝင်သည်။ ရေဒီယိုတွင်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပိုက်၊ ရေထည်စနစ်အတွက်အပူပေးပိုက်၊ အပြင်အပူပေးစက်နှင့်အပူပေးစက်သုံးကိရိယာစသည်တို့ပါရှိသည်။
။ အပြင်ဘက် shading စနစ်။
။ Shading စနစ်အတွင်းပိုင်း။
Jianda Greenhouse Company မှခရမ်းချဉ်သီးအတွက်စိုက်ပျိုးသော Polycarbonate ဖန်လုံအိမ်သည်လာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်စုံစမ်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ အရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်းချိုသာသော၊ လျှော့စျေး၊